६ वर्ष पछि उठ्यो भूकम्पले ढालेको धरहरा, आज प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै ! – Sodhpatra
६ वर्ष पछि उठ्यो भूकम्पले ढालेको धरहरा, आज प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नयाँ धरहराको उद्घाटन गर्दै
प्रकाशित : ११ बैशाख २०७८, शनिबार ०९:११ April 24, 2021
६ वर्षअघि भूकम्पले ढालेको धरहराको टावर बनाउने काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नयाँ धरहराको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । भत्किएको धरहरा यथावत् राखेर नजिकै अर्को धरहरा बनेको छ ।